Lafta Gareen oo maanta Muqdishou imaanaya la kulanka wafdiga Qatar - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Lafta Gareen oo maanta Muqdishou imaanaya la kulanka wafdiga Qatar
Lafta Gareen oo maanta Muqdishou imaanaya la kulanka wafdiga Qatar
Farmaajo iyo Fahad oo walwal ka qaba in wafuuda Qatar ay la kulmayaan oo kali ah mucaradka iyo bulshada rayidka ayaa waxa ay ka shaqeeyeen ay Muqdisho isugu keenaan dowlad goboleedyada ayaga taabacsan oo ku jiro Lafta Gareen.
Hadaba Madaxweynaha Dowlad Goboeedka Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho Ujeedka safarkiisa ayaa lagu sheegay in ay tahay inuu maanta ka qeyb galo kulan ay madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug ay la leeyihiin wafdiga ka socda dowladda Qatar.
Kulanka ayaa looga hadli doono sida loo dhameyn lahaa tabashooyinka ka dhashay doorashada iyo dib u dhaca ku yimid. Wafdiga ka socda Qatar ayaa kulamo ka wada magaalada Muqdisho.